Escape Chalet Comandau - I-Airbnb
Escape Chalet Comandau
Comandău, Județul Covasna, i-Romania
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Andra
I-Escapade Chalet iyi-villa yesimanje, etholakala e-Comandau commune, County Covasna.
I-villa inikeza indawo efanelekile yeqembu labantu abangu-8 elinamakamelo angu-4 anemibhede ephindwe kabili, amagumbi okugeza angu-4, ikhishi elihlonyiswe ngokugcwele, igumbi lokuhlala elivulekile elineziko kanye nethala elingaphakathi eliklanyelwe ukudla.
I-chalet ine-pavilion evaliwe enezitsha, izoso, isitofu sezinkuni, indawo yomlilo kanye nendawo yokudlela. I-villa futhi inengadi enezindawo ezi-2 ezingaphandle zokuphumula.
Indawo yokupaka imahhala futhi itholakala ngaphakathi kwegceke.
Itholakala endaweni ephakeme ngamamitha ayi-1000, iComandău commune itholakala esifundeni saseCovasna, izungezwe izintaba zeCarpathian Curvature. Phakathi kwedolobha lase-Covasna nedolobha lase-Comandau kukhona cishe amakhilomitha angu-15 angambozwa emgwaqweni wasehlathini onakekelwa kahle.
I-Villa Escapade Chalet iyakwamukela endaweni eyingqayizivele enhliziyweni yehlathi, enikeza igceke elinendawo eluhlaza, inkundla yangaphandle, izindawo ezi-2 zokuphumula ngasemfudlaneni, i-sauna ne-jacuzzi.